အယ်ဖိုး: ကွန်ပျူတာအလှဆင်နဲ့ အသိပညာဆိုင်ရာ(1700)ကျော်ပါဝင်တဲ့ Google desktop software
ကွန်ပျူတာအလှဆင်နဲ့ အသိပညာဆိုင်ရာ(1700)ကျော်ပါဝင်တဲ့ Google desktop software
ကျတော်အသုံးပြုနေတဲ့ google desktop software လေးကို ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
desktop ကိုအလှဆင်ပေးတဲ့ ပြင် clocks ,calendar,quotes ,lovers (hearts),weather,photos,media players,maps,notes အပြင် တခြားစုံလင်တဲ့ gadgets တွေပါဝင်တဲ့ software လေးပါ ...
မလိုတဲ့ဟာကို အလွယ်တကူဖြုတ်ပစ်နိုင်တဲ့အပြင် ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင်လဲ လွယ်ကူတာကြောင့် အဆင်ပြေပါတယ် ...
ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်၇ဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို romatic ဆန်ဆန်လေး လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲရပါတယ် love နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါပါတယ်...
အသိပညာစာတွေ အမှတ်အသားပြုထားလို့ ရမယ့် အ၇ာတွေ ကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ေ၇းမှတ်ထားလို့ ရပါတယ် ...
download link လေးပါ...
သုံးနည်းလေးကိုလဲ လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ ...
၁။software လေးကို run လိုက်ပါ...desktop ညာဖက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...
၂။ပြီးရင်လိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုချန်ထားပြီး မလိုတဲ့ဟာလေးတွေကို တခုချင်း x ပုံစံလေးကိုပေးပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ ရပါတယ် ..
၃။ထပ်ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင် right click > add gadgets >All ကိုသွားပါ ...
၄။ကိုယ်အသုံးပြုလိုတဲ့ အရာလေးတွေကို စာမျက်နှာပေါင်း(၁၄၅) မျက်နှာထဲကရှာလို့ ရပါတယ်...
၅။ကြိုက်တဲ့ ဟာလေးကို add လုပ်ပြီး yes ပေးလိုက်ရုံ ပါပဲ ...!
ps. စစချင်း connection ကောင်းမှ gadgets တင်လို့ ရပါတယ်...တင်ပြီးရင်တော့ နောက်ပိုင်း တချို့ အ၇ာတွေကလွဲလို့ connection မလိုတော့ပါဘူး ခင်ဗျာ ...